Hutano, 04 Kubvumbi 2019
China 4 Kubvumbi 2019
Kubvumbi 04, 2019
Vanhu Vafa Mutsaona yeCyclone Idai Vodarika Mazana Matatu
Huwandu wevanhu vafa mutsvaona ye Cyclone Idai hwasvika pavanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe, 339, hurumende ichiti huwandu uhu hucharamba huchikwira.
Kubvumbi 03, 2019
America Inopa Mari Nemapfunde Kune Vakavhiringwa Nedutumupengo kuManicaland
Muzinda weAmerica muZimbabwe wabvisa mari inoita mamirioni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora kuti ishandiswe mukubatsira vanhu vanoita zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu vakavhiringwa nedutumupengo re Cyclone Idai kumatunhu eChipinge neChimanimani.
Kubvumbi 02, 2019
Hurumende Inoti Huwandu hweVanhu Vakafa Huri Kuramba Huchikwira
Vachitaura nevatori venhu mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvemadhorobha nematunhu, VaJuly Moyo, vati mabasa ekutsvaga vakashaikwa mushure mekunge misha yavo yakukurwa kana kuputswa nedutumupengo iri ari kuenderera mberi uye nyika yave kubatsirwa neimbwa dzakabva kuSouth Africa.
Amai Karenyi Vanoti Zvinhu Hazvina Kumira Zvakanaka kuChimanimani
Vanhu vanodarika mazana mashanu havasi kuzivikanwa kuti varipi zvichitevera mafashamu nedutumupengo rakarova matunhu eManicaland neMasvingo masvondo maviri apfuura.
South Africa Inoti Ichachengetedza Zvizvarwa Zvekune Dzimwe Nyika
Hurumende yeSouth Africa yavimbisa kuchengetedza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinogara nekushanda muSouth Africa.
VanaChiremba naVanamukoti Vobatsira Vakawirwa neDambudziko reCyclone Idai
Mumwe wevanachiremba ava, Doctor Matthew Wazara, vanoti vanhu vakawanda vari munzvimbo dzakaparadzwa nedutumupengo nemafashamu emvura, havachina mishonga yekupodza kana kunyaradza zvirwere zvinenge shuga, diabetes, ne High Blood Pressure.
Kurume 30, 2019
Madzimai Onetsekana Munguva Yaanenge Achitevera kuChimanimani
Mumwe mugari wemubhuku rekwaChinamira kuSkyline, Amai Sarudzai Kubvenyika, vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuvakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Kurume 29, 2019
Mamwe Madzimai Oita Gumbo Mumba Gumbo Panze Kuitira Kuti Awane Chikafu kuChimanamani
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi, Amai Revai Jopa, vanoti kubudikidza nekushaya chokudya, madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mumba gumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopihwa chikafu pachinenge chogoverwa.
Mota yeMasoja Inouraya Vanhu Vashanu kuChimanimani
Mumwe wevaona izvi zvichaitika, VaTichaona Chinamira, vati rhori yemasoja iyi yashaya mabhureki zvaitadzisa kumira sezvo mutyairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Kurume 27, 2019
Paramande Yoshanyira Masvingo Kuti Iongorore Zvakaparadzwa neCyclone Idai
Komiti yeparamende yeStanding Rules and Orders iri Musvingo umo iri kutanga kuita ongororo nhasi yekufa kwevanhu uye kuparadzwa kwemisha yavo nezvipfuyo nedutumupengo reTropical Cyclone Idai.
Kurwiswa kweZvizvarwa Zvisiri zveSouth Africa Kwotanga Zvekare muSouth Africa
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa zvichitevera kutanga zvakare kwemhirizhonga yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvemu South Africa.
Kurume 26, 2019
Dhiziri nePeturu Zvonetsa Kuwana Zvakare muZimbabwe
Vakawanda munyika vari kuchema chema nekushaikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari zvapa kuti vemichovha vawedzere mari.